Henri Ratsimbazafy sy ny mpijery : tsy bobongolo ilay fitia | NewsMada
Henri Ratsimbazafy sy ny mpijery : tsy bobongolo ilay fitia
Rehefa tsy tazantazana teny an-tsehatra lehibe, nanatontosa fampisehoana tetsy amin’ny CCEsca Antanimena i Henri Ratsimbazafy, omaly. Seho tsy nanam-paharoa. Nitodihana ny lasa, niatrehana ny ankehitriny sady nahatazanana ny mety ho endriky ny hoavy.
Niaiky ireo rehetra tonga teny amin’ny CCEsca Antanimena, omaly, fa kanto tanteraka ny fampisehoana niarahana tamin’i Henri Ratsimbazafy. Seho nahitana sy nanaporofo fa tsy bobongolo ilay fitia mampifamatotra azy sy ny mpitia zavakanto, mampifandray azy sy ny kanto ataony, eo aminy sy ny mpanakanto tanora, sns.
Nifantoka tamin’ny tolotra teny an-tsehatra ny mpijery, nitehaka, nihira. Ilay feo sy fihetsika nahalalana an’ity andrarezin’ny kanto ity hatramin’izay, mbola nambabo hatrany ny fon’ireo naheno izany teny an-toerana. Zary resaka nifanakalozan’i Henri Ratsimbazafy sy ny mpijery ny nampitain’ny tononkira tsirairay. Nisy rahateo ny fotoana nidinany ny sehatra ka nihirany teny anivon’izy ireo. Voatazona hatramin’ny farany ilay hafanana tao anaty efitrano nandritra ny fihirana ireo hira 32 teny an-tsehatra.
Fiarahan’ny raiamandreny sy zanaka
Saika mpanakanto tanora avokoa no niaraka tamin’i Henri Ratsimbazafy nandritra ity fampisehoana omaly ity. Anisan’ireny ny mpitendry zavamaneno toa an-dry Hasina (saksofona), Tsanta sy Laza (trompetra), Andry Mika (trombone), Tojo (gitara beso), Gérard (gitara), Solofo Bota (piano). Toy izany koa ny feo lafika nahitana an’i Lizy, Sarah ary Jaovola. Teo koa i Melloh sy Johana. Fiarahan’ny raiamandreny sy zanaka nitondra aina vao indray ho an’ny tontolon’ny zavakanto malagasy ny azy ireo sy Henri Ratsimbazafy.
Nanamafy izany ilay hira « Hodian-tsy hita ve » izay nanana « endrika » soul miraika kokoa any amin’ny RNB vokatry ny fandrindrana nataon’i Fidy Rabearisoa. Babon’ny fampiaraham-peon’i Lilie sy Henri Ratsimbazafy tamin’ilay hira « Lambanao mikopakopaka » ny teny an-toerana. Toraka izany koa ny « Satria tia ahy ianao » niarahany nihira tamin’i Bodo. « Ianao » niaraka tamin’i Elsie, « Anao no nindramiko » niaraka tamin’ny TGC.
Tazana teny amin’ny CCEsca Antanimena, omaly, fa mbola mangetaheta ny hisian’ny seho manaraka ataon’i Henri Ratsimbazafy ny mpitia zavakanto.